तपाईंको स्पप खरीद गर्नुहोस्: उपभोक्ताको लागि निर्मित एक मोबाइल डिल अनुप्रयोग Martech Zone
मोबाइल पुरस्कार, मोबाइल डीलहरू, मोबाइल कुपनहरू, ईमेलहरू ... यी सबै अनुप्रयोगहरूको एक साझा समानता हुन्छ। तिनीहरू सबै धक्का अनुप्रयोगहरू छन् जसले अन्तर्विना उपभोक्तालाई पछाडि बढाउँदै जान्छन् उनीहरूलाई प्रमोसनहरू प्रयोग गर्न। यो केही उपभोक्ताहरूको लागि ठूलो हो, तर धेरै उपभोक्ताहरू सम्झौताहरूको फाइदा लिन चाहन्छन् जब तिनीहरू तयार छन्। त्यो पछाडिको विचार हो तपाईंको स्पट किन्नुहोस्.
म यस अनुप्रयोगको पछाडि रणनीतिको कदर गर्छु किनकि यसले प्लेटफर्म वा व्यापारीको सट्टा प्रयोगकर्तालाई सशक्त गर्दछ। उपभोक्ताले सेटिंग्समा डायल गर्न सक्दछन् जसमा उनीहरू खुल्ला व्यापारीहरू अनुसरण गर्न चाहान्छन् साथै उनीहरू चाहानुहुन्छ वा कहिले उनीहरूले प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। सबै भन्दा राम्रो - कुपन प्रिन्ट गर्न आवश्यक छैन, चेकआउटमा मोबाइल भउचर प्रदर्शन गर्नुहोस्।
व्यापारीहरूले केवल राजस्व सेयरको सट्टा एक मासिक शुल्क तिर्छन्। तपाईंको सम्झौताहरू तपाईंको स्पट एप्लिकेसनमा जानुहुँदा, तपाईंले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाउनलोड गर्न ड्राइव गर्न प्रयास गर्नुपर्दैन तपाईको अनुप्रयोग। यसको मतलब तपाईको प्रत्येक शपमा पहुँच छ तपाईको स्पट प्रयोगकर्तामा ... केवल व्यक्तिहरू तपाईले साइन अप गर्न धकेल्नु हुँदैन। एक बढ्दो ज्वारले सबै जहाजहरूलाई उठाउँदछ! उपभोक्ताहरूले मात्र डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईंको स्पट मोबाइल अनुप्रयोग खरीद गर्नुहोस् र तिनीहरूको सबै मनपर्ने रिटेल स्थानहरू र उनीहरूले प्रस्ताव गरेको डेलहरूमा पहुँच छ।
व्यापारीहरूले आफ्नो सम्झौताको सूची व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्, तिनीहरूलाई वास्तविक-समयमा प्रस्ताव गर्न, र अनुमोदनको आवश्यकता बिना नै तुरून्त नयाँ डिलहरू साझेदारी गर्न सक्दछ वा अन्य प्लेटफर्महरू जस्ता सम्पादनहरू। साथै, व्यापारीहरूले तिनीहरूको सबै प्रगतिहरूको साथ ट्र्याक गर्न सक्दछन् विश्लेषण कि ब्याज र मोचन डेटा उपाय। यदि तपाईं एक व्यापारी हुनुहुन्छ र एक परीक्षण ड्राइव को लागी आफ्नो स्पप शप लिन चाहानुहुन्छ - यहाँ लागू गर्नुहोस्.
टैग: सम्झौतास्थान आधारितम्यापिङमोबाइल अनुप्रयोगमोबाइल कूपनमोबाइल सम्झौतामोबाइल प्रस्तावहरूनजिकका सौदाहरूआफ्नो ठाउँ किन्नुहोस्